ट्वाइलेटको पानीबाट ५० बस चले, बागमतिको दुर्गन्धबाट पनि बस चलाउन संभव ! Bizshala -
ट्वाइलेटको पानीबाट ५० बस चले, बागमतिको दुर्गन्धबाट पनि बस चलाउन संभव !
काठमाण्डौ । ट्वाइलेटको पानी समेत कसैले खरीद गर्छ भन्ने कुरा सुन्दा तपाई अचम्ममा पर्नुहोला । तर, योे सत्य कुरा हो । भारतको नागपुरमा सरकारी एजेन्सीहरुले ट्वाइलेटको पानी एक कम्पनीलाई ७८ करोड भारुमा बिक्री गरिदिए । अब त्यसबाट नागपुर शहरमा ५० वटा एसीजडित बसहरु चलाउने तयारी गरिएको छ । केन्द्रीय परिवहन मन्त्री नितिन गड्करीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय मिडियाहरुले जनाएअनुसार नागपुरमा वैकल्पिक उर्जालाई लिएर कैयन प्रयोगहरु गर्न थालिएको छ । यसमध्ये एउटा ट्वाइलेटको पानीबाट बायो सिएनजी निकालेर त्यसबाट बस चलाउने योजना समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अहिले पनि यस्ता ५० वटा बस चलिरहेका छन् ।
गंगाको दुर्गन्धबाट ग्यास निकालिने, २६ शहरमा बस चलाइने
गड्करीले भनेका छन् कि पेटोलियम मन्त्रालयको अधीनमा काम गर्ने तेल वा ग्यास कम्पनीसँग एक सम्झौता गरिएको छ, जसअन्तर्गत गंगा किनारामा रहेका २६ शहरलाई त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । उनले बताएका छन् कि पानीको दुर्गन्धबाट निस्किने मिथेन ग्यासबाट बायो सिएनजी तयार गरिनेछ र यसबाट २६ शहरमा सिटी बस चलाइनेछ । यो कामबाट ५० लाख युवाले समेत रोजगारी पाउने बताइन्छ । यसबाट गंगाको सफाई समेत हुने गड्करीको दाबी छ ।
गड्करीलाई उद्धृत गर्दै मिडिया रिपोर्टमा बताइएअनुसार कोइलाबाट मिथेन निकालेर निकट भविष्यमै मुम्बई, पुणे र गुहावटीमा सिटी बस चलाउने तयारी समेत थालिएको छ । उनका अनुसार भारतमा ६२ भारु प्रतिलिटर पर्ने डिजेलको हाराहारीमा काम गर्ने मिथेनको मूल्य १६ भारु मात्र पर्नेछ । उनका अनुसार भारतका वैकल्पिक उर्जा उत्पादनका लागि कैयन प्रयोगहरु भइरहेका छन् ।
भारतले जसरी दुर्गन्धबाट मिथेन निकालेर बस चलाउन खोजिरहेको छ, त्यसलाई अनुसरण गर्दै नेपालले समेत सो काम गर्न सक्छ ।
कैयन हप्तादेखि थालिएको बागमति सफाई अभियानले प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यहाँ पनि बागमतीको दुर्गन्धित पानीबाट मिथेन निकालेर काठमाण्डौ उपत्यकामा सिटी बस चलाउन सकिन्छ । देशका अन्य क्षेत्रमा समेत सार्वजनिक शौचालयको पानीबाट ग्यास निकालेर त्यहाँ समेत बस चलाउन सकिने संभावनाको ढोका भारतको यो प्रयोगबाट खुलेको छ ।
मोबाइल पानीमा भिज्यो, यसरी जोगाउनुहोस् बिग्रनबाट
काठमाण्डौ । बर्खायाम सुरु भइसकेको छ । यदि पानी परिरहेको बेला...
यस्तो छ खाटको इतिहास, चट्टानदेखि काठसम्म आइपुग्दाका रोचक
काठमाण्डौ । दिनभरको थकान हामी खाट (ओछ्यान) मा गएर नै मेट्न सक्छौँ ।...
फेस एप चलाउँदै हुनुहुन्छ, सावधान हुनुहोस्, व्यक्तिगत डाटा
काठमाण्डौ । विश्वमा अहिले फेस एपले तहल्का मच्चाइरहेको छ । यो एपको...
काठमाण्डौ । के तपाईले पैसाको विषयमा आफ्नो जीवनसाथीसँग विवाद...
सावधान ! सन्दिग्ध एपले खालि हुन सक्छ तपाइँको बैंक खाता
काठमाण्डौ । यदि तपाइँ धेरैजसो मोबाइल बैंकिङ प्रयोग हुन्छ भने अब...
पहिला सेल्फी अनि पढाइ, नत्र हुन्न कमाई
काठमाण्डौ । हिजोआज सानादेखि वृद्धासम्म सबै सेल्फी खिचेर आफ्नो...
सन्देश लेखिएका टिशर्ट: तपाइँको टिशर्टमा लेखिएका शब्दले
'लुक एट मि (मलाई हेर्नुहोस्)!" यस्तो सन्देश लेखिएका कपडा लगाउने...
बचत गर्न चाहनुहुन्छ तर सकिरहनुभएको छैन ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
काठमाण्डौ । तपाइँ राम्रो आम्दानी गर्नुहुन्छ । तर तपाइँलाई लाग्छ...